လိုက်လျောခဲ့ရ – Grab Love Story
ရန်ကုန်တိုင်း အုတ်ဖို့မြို့လေးမှာ ကုန်းလမ်း ရေလမ်း ပေါက်ရောက်သဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်။ အုတ်ဖို မြို့စွန် ရပ်ကွက်လေးထဲ ! ဒို့ရိုးရာ … အရက်ဆိုင် ! လေးမှာ အနီးနား ရပ်ကွက်တွေက အစ အကုန်သိနေကြ၏။ အရက်ဆိုင်အား ဦးစီး လုပ်ကိုင်သူမှာ အသက် ၃၄နှစ်ခန့် သဲအိခိုင် ဆိုသော မိန်းမချောတယောက် ဖြစ်သည်။ အရက်ဖြူဆိုင် ဆိုပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ချက်ပြုပ် ကြော်လှော်ထားသော အမြည်းစုံလင်စွာဖြင့် ဘီယာနှင့် ရွှမ်ပါ တွဲဖက်ရောင်းချ ပေး၏။ သဲအိခိုင်မှာ အိမ်ထောင်သည် တဦး ဖြစ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပါးနပ်သဖြင့် အရက်ဆိုင်လေးမှာ နေည မပြတ် အမြဲ စည်ကားနေတော့သည်။ အထူးသဖြင့် သဲအိခိုင်၏ လှိုင်းထနေသော နို့အုံများနှင့် လမ်းလျှောက် လိုက်တိုင်း တုန်ခါနေသော ဖင်သားစိုင်ကြီးများက ပုရိသ အပေါင်းအား ဖမ်းစားထားနိုင်၏။ ” မသဲ … ဘီအီး ၁လုံးနဲ့ အချိုရည် တစ်လုံး ထပ်ပေးဗျာ ” ” အေးအေး … မောင်တိုး … အချိုရည်ကတော့ လိမ္မော်ပဲ ရမယ်နော် ” ” မိသဲရေ … ငါတို့ မြင်းခွာရွတ် သုပ် တပွဲ … ပေးဦးဟေ့ ” ” မြင်းခွာရွက်က … ဒီနေ့မရတာ ကိုမောင်တင့်ရေ … မုန်လာချဉ်သုပ်လေး … အားပေးလေ … ရှယ် သုပ်ပေးမှာပေါ့ ” ” အေးပါဟာ … မရှိတော့လည်း ရှိတာသာ သုပ် … ငရုပ်သီး စပ်စပ်လေးနော် ” ” အွန်းပါ … ကိုမောင်တင့်ရဲ့ … ဒီဘက်က ကိုသိန်းတို့ရော … အသုပ် မှာဦးမလား လက်စနဲ့ … တခါတည်း သုပ်မလို့ ” သဲအိခိုင် တယောက် ဆိုင်လေးထဲ လှည့်ပတ်သွားကာ ဖေါက်သည်များအား လိုက်မေးနေတော့သည်။ စားပွဲထိုး ငှားပြန်လျင် သားလောက် အရွယ်လေးများနှင့် လင်ဖြစ်သူ အောင်ကြီးမှ သဝန်တိုကာ မူးရမ်းတတ်သဖြင့် ထပ်မခေါ်တော့ပေ။ ဆိုင်၏ အနောက်ဖက် ပိုက်ဆံရှင်းသော စားပွဲခုံလေးဘေးတွင် အကြော်အလှော်များနှင့် အသီးအရွတ်များ သုပ်ရန် ပြုလုပ်ထားသော ပန်းကန်စင်လေးပေါ် မှာထားသော အသုပ်များအား ဆက်တိုက်သုပ်ကာ ဆိုင်ထဲ သွားချပေးလိုက်ပြန်သည်။
ဆိုင်ထဲ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း သူမ နောက်ပိုင်းအလှအား ခိုးကြည့်ကာ မျက်စိအရသာ ခံရင်း စိတ်ကူးဖြင့် ပစ်မှားနေကြသူများ အများကြီးရှိကြ၏။သဲအိခိုင်အား နောက်မှကြည့်လျင် အပျို အရှုံးပေးရအောင်ပင် ခန္ဓာကိုယ်က ဆွဲဆောင်မှု့ ရှိသည်။ ထိုသူများထဲတွင် တရပ်ကွက်ကျော်မှ ဦးလှမောင်မှာ အဆိုးဆုံး ဖြစ်၏။ ဦးလှမောင်မှာ အသားမဲမဲ ဆံပင်တိုတိုကောက်ကောက် လက်ပြင်ကိုင်းကိုင်းဖြင့် ငွေတိုးပေးစားသော လူတယောက် ဖြစ်သည်။ ” သဲသဲ … အောင်ကြီးရော ” ” မနက်ကတည်းက တနေကုန် သောက်ပြီး … အခန်းထဲ သေနေပြီလေ ” ” ညကြ … အခြေနေရော ” ” ဟင် … ဒီနေ့ည ဖဲဝိုင်း သွားမယ်ဆိုပြီး … သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ … ပြောသံတော့ ကြားထားတယ် … အိုးးး … လူတွေနဲ့ … မလုပ်နဲ့လေ … ကျွတ် ” ဦးလှမောင် မှာ နောက်ဖေး အိမ်သာဘက် သေးသွားပေါက်ပြီး ဆိုင်ထဲ ပြန်အလာ ခုံပေါ်ထိုင်လျက်အနေထားဖြင့် အိကားနေသော သဲအိခိုင် ဖင်သားကြီးအား ပွတ်သပ်နေ၏။ မို့မောက်သော နို့အုံကြီးမှာ စားပွဲခုံပေါ် လက်ကွေးထောက်ထားသဖြင့် လက်မောင်းသား နှစ်ဖက်ပေါ်တင်နေကာ စွင့်ကား နေသော ဖင်သားကြီးမှာ ထိုင်ခုံပေါ် အိကားထွက်နေရသည်။ ” ခု … ငါ တအား ထနေပြီဟာ … ကြည့်ပါလား … နင့် လင် … ညပိုင်း ဖဲဝိုင်းသွားရင် … ကောင်းမှာပဲ ” ဦးလှမောင်မှာ တကယ်ပင် ရမ္မက်စိတ် ထကြွကာ ပုဆိုးပြင်ဝတ်သလိုနှင့် ခါးပုံစ ဖြည်ကာ ပုဆိုး ရှေ့ခြမ်းအား ပေါင်လယ် လျှောကာ ပြလိုက်ပြန်၏။ ” အမလေး … ဦးတုတ်ကြီး ဟာကလည်း … ခိခိ … မနက်ကမှ … သဲသဲ … ဂွင်းထုပေးထားတာကို … ပုဆိုး ပြန်ဝတ်ပါဦး … ဆိုင်ထဲ လူတွေနဲ့လေ ” ပထမ တကြိမ် အလိုးခံပြီးကတည်းက စံချိန်မှီ လီးပိုင်ရှင် ဦးလှမောင်အား သဲအိခိုင်မှ နှစ်ဦးထဲရှိချိန် ဦးတုတ်ကြီးဟုသာ ခေါ်တော့သည်။ ငွေသိမ်း စားပွဲခုံလေးမှာ ဆိုင်အနောက်ဖက်ခြမ်းတွင် ရှိကာ ရုတ်တရက် ဆိုင်ထဲမှ ကြည့်လျင် စားပွဲအောက်ပိုင်းအား ဆေးလိပ်ကြေငြာ ဗင်ဒိုင်းများဖြင့် ကာထားသဖြင့် ခါးတဝက်လောက်ထိ မမြင်ရပေ။ ထို့ကြောင့် ဦးလှမောင်မှာ အတင့်ရဲနေတော့သည်။ မနက်ပိုင်း အမြည်း ချက်ပြုတ်ရန် အကူငှားထားသော မာမာဆိုသည့် ကောင်မလေး ပြန်သွားသည်နှင့် သဲအိချိုမှာ ရေချိုးပြီးချိန် ဦးလှမောင် တခေါက် ရောက်လာသေး၏။ မာမာ မှာလည်း အရက်ဆိုင်တွင် မနေပေ အမြည်းများ ကူညီချက်ပြုတ်ပြီးသည်နှင့် နေ့တွက်ယူကား သူ့အိမ်သူ ပြန်လေ့ရှိသည်။ ဦးလှမောင် ရောက်လာစဉ် လင်ဖြစ်သူ အောင်ကြီးမှာ မူးအိပ်နေသဖြင့် နောက်ဖေး ရေဘုံပိုင်နှင့် ရေချိုးနေသော သဲအိခိုင်အား လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပင် ထိုင်ကြည့်နေ၏။ ဦးလှမောင် ထိုင်ကြည့်နေသည်ကို မပြောသာသည့် အကြောင်းတရားကလည်း ရှိနေပြန်သည်။
သဲအိခိုင်မှာ အရက်ဆိုင်ဝင်ငွေနှင့် လင်မယား ၂ယောက် မပူမပင် စားနိုင်သော်လည်း ချမ်းသာချင်စိတ် များကာ ဖြတ်လမ်းမှ လိုက်တော့သည်။ ၂လုံး ၃လုံး လောင်းကစားလုပ်ရာ တဖြည်းဖြည်း အကြွေးတင်လာ၏။ ကြွေးပူများ များလာရာ အရက်ထဲ လှည့်ပတ်ချေးကာ ပေးရင်း မနိုင်းမနင်း ဖြစ်လာတော့သည်။ နောက်ပိုင်း ဦးလှမောင်ဆီ ချေးရာ အလွတ်ချေးမရခဲ့ပေ။ လိုအပ်နေသော ငွေ၁၂သိန်းအား ယစ်မျိုးလိုင်စင်အား အပေါင်ထားကာ ၁၅ကျပ်တိုးဖြင့် ချေးယူလိုက်၏။ ၅လ ထိ အတိုး မသတ်နိုင်ပဲ အတိုးအရင်းပေါင်းကာ သိန်း၂၀ ကျော်လာစဉ် ဦးလှမောင် ဘက်မှ လိုင်စင်အား အပြီးသိမ်းရန်ထိ အသံထွက်လာ တော့သည်။ သဲအိခိုင် တယောက် ကျင်းထဲကြပ်ထဲ ရောက်ကာ နောက်ပိုင်း ဦးလှမောင် အလိုကျ လိုက်လျောခဲ့ရ၏။ ပထမဆုံး အကြိမ်မှာပင် မျော့နေအောင် ခံခဲ့ရာ လင်ဖြစ်သူ အောင်ကြီးထက် ကြီးမားတုတ်ခိုင်ပြီး ဂေါ်လီ၃လုံးပါသော လီးမဲကြီးအောက် သတိလစ်မတတ် ငယ်သံပါအောင် အော်ကာ အလိုးခံလိုက်ရ၏။ စောက်ဖုတ်နူတ်ခမ်းသားများ ကွဲကာ ၃ရက်ခန့် ကွတ ကွတဖြင့် ကျိန်းစပ်နေသည်။ ခုလည်း သူမ နောက်ကျောဘက်မှ ထိုင်ကြည့်နေသော ဦးလှမောင်ကြောင့် ရေအမြန်ချိုးကာ ရေလဲထမိန်လေး လဲလိုက်တော့၏။ ထမိန်ရင်လျားနှင့် သဲအိခိုင် နောက်မှ ကပ်လိုက်သွားရာ အိပ်ခန်းထဲတွင် တခူးခူးဖြင့် ဟောက်သံများ ထွက်ကာ အိပ်မော ကျနေသော အောင်ကြီးအား တွေ့လိုက်ရသည်။ သို့သော် ဦးလှမောင် တယောက် ရမ္မက်စိတ် ထကြွနေသဖြင့် အိပ်ခန်းပေါက်မှ သဲအိခိုင် ခန္ဓာကိုယ်အား ကြည့်ကာ ပေါင်ကြားမှ လီးကြီးက ထောင်မတ်နေ၏။ ” ကောင်တာနားက စောင့်လေ … ဦးတုတ်ကြီးရဲ့ … ကိုအောင်ကြီး အိပ်နေတာ ဟိုမှာ ” သဲအိခိုင်မှာ လင်တော်မောင် အိပ်နေသည်ကို ခပ်တိုးတိုး ပြောပြကာ နဖူးမှ ရေစက်လေးများ တဘက်အဟောင်းဖြင့် သုတ်ရင်း လှမ်းပြောနေသည်။ သဲအိခိုင် ဆံနွယ်များက နောက်ကျောဘက် ဖြည်ချလိုက်သဖြင့် ခါးလာက်ထိ စင်းကျနေသည်။ မျက်နှာနှင့် ရင်ညွှန့်မှ ရေစက်လေးများ တဘက်ဖြင့် အရင်သုတ်ပစ်လိုက်၏။ အစိမ်းရောင် အင်္ကျီ လက်ပြတ်လေး ဝတ်နေစဉ် လက်မောင်းအိုး ဖွေးဖွေးလေးကြားမှ လက်နှစ်ဖက် တိုးထွက်လာကာ နို့အုံများအား ညှစ်ချေခံလိုက်ရသည်။ ” အိုး … ဟာကွာ … အဲလောက်တောင် မစောင့်နိုင်ရင် … လာလာ … ကောင်တာနား သွားစို့ ” သဲအိခိုင်မှာ လင်ဖြစ်သူ နိုးလာလျင် မိုးမီလောင်မှာ စိုးသဖြင့် ဦးလှမောင် ကျေနပ်စေရန် ဂွင်းထု ပေးလိုက်ရတော့သည်။ ” ဝေါ ဝေါ … ဝုန်းးးး ဂျိန်းးးးး ဒလိန်းးးး ဝေါ ဝုန်းးးးး ဂျိန်းးးး …… ဝုန်းးးးး အုံးးးး ဒလိန်းးးး …… အမလေး ” သဲအိခိုင် တယောက် ဆိုင်တံခါး ပိတ်ရင်း စူးစူးဝါးဝါးအော်ဟစ်ကာ အခန်းလေးထဲ ပြေးဝင်လိုက်သည်။ လင်ဖြစ်သူ အောင်ကြီးမှာ ညနေကတည်းက ပိုက်ဆံ ၂သောင်း မရမက တောင်းကာ ဖဲဝိုင်း ထွက်သွားတော့၏။
သို့သော် ကုတင်ပေါ်တွင် ပေါင်ကားထိုင်ကာ ပုဆိုးအား ပေါင်လယ်ထိလျှောချရင်း လီးကြီးအား ပွတ်သပ်နေသော ဦးလှမောင် ရောက်ရှိနေသည်။ မနက်ပိုင်းမှ ဂွင်းထုခိုင်းကာ အာသာမပြေသဖြင့် ညပိုင်း လိုးရန် ရောက်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ” မိုးကြိုးတွေ ပစ်နေတာ … အရမ်းကြောက်တာပဲ ဦးတုတ်ကြီးရယ် ” ” မကြောက်ပါနဲ့ … သဲသဲရာ … ဦးလေး ရှိနေတာကို … လာထိုင် ” စကားဆုံးသည်နှင့် ကုတင်ပေါ် တင်ပလွဲဝင်ထိုင်ရင်း ဦးလှမောင် ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်ကာ ပေါင်ကြားမှာ လီးကြီးအား စိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ လီးကြီးမှာ နီညိုရောင်သန်းနေပြီး တုတ်ခိုင် ထွားကြိုင်းလွန်၏။ ထိပ်ဖျားမှ ဒစ်ကြီးကော့နေကာ ဒစ်ဖူး နောက်ဖက်နှင့် ဘေးတဖက် တချက်စီတွင် လီးအရည်ပြားအောက် ဖုထစ်နေသော အလုံးလေးများ မြင်နေရသည်။ သဲအိခိုင်တယောက် လီးကြီးအား ငုံ့ကြည့်ရင်း တင်ပလွဲထိုင်နေရာမှ ခြေနှစ်ဖက်လုံး ကုတင်ပေါ်တင်ကာ ဦးလှမောင် ပေါင်ကြားထဲ တိုးဝင်လိုက်ပြန်၏။ ဦးလှမောင် မှာ ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်လာသော သဲအိခိုင် ကိုယ်လုံး ထွားထွားအား ပွေ့ဖက်ကာ မျက်နှာလေး ဆွဲမော့လိုက်သည်။ မျက်ခုံးကောင်းကောင်း ပါးဖေါင်းဖေါင်း လေးနင့် မျက်နှာဝိုင်းလေး ပေါ်မှ မျက်ဝန်းနက်ကြီးက တစုံတခုအား တောင်းဆိုနေသည်ကို တွေ့မြင်ရ၏။ ပါးပြင်လေးအား နမ်းရာ သဲအိခိုင်မှာ ဦးလှမောင် ကျောပြင်အား တင်းကျပ်စွာ ပြန်လည်ဖက်တွယ်လိုက်သည်။ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်ကာ ထမိန်ပေါ်မှ ဖင်သားစိုင်ကြီးအား ဆုပ်ကိုင်ပေးရင်း ကုတင်ပေါ် အသာလှဲချပစ်၏။ ကိုယ်လုံးချင်း ထပ်ကာ အနမ်းမပျက်ပဲ သဲအိခိုင် အင်္ကျီကြယ်သီးများအား တလုံးချင်း ဆွဲဖြုတ်နေသည်။ ” အင်းဟင်း … ပြွတ် … ပလပ် ပလပ် ” အင်္ကျီချွတ်ပြီးသည်နှင့် ပုခုံးသား ဖွေးဖွေးအောက် မို့မောက် ထွက်ကာ နို့အုံကြီးအား မနိုင်တနိုင် ထိန်းထားသော အသားရောင် ဘော်လီကိုပါ ထပ်မန်ချွတ်ပစ်လိုက်၏။အနည်းငယ် အိတွဲနေသော နို့အုံကြီးထိပ်မှ နို့သီးခေါင်း ပန်းရောင်လေး ၂ခုက ခေါင်းထောင်နေသည်။ ” အားပါး … လှလိုက်တာ … သဲသဲရာ … ပြွတ် ပြွတ် ” ဦးလှမောင်မှာ နို့သီးခေါင်းလေးစို့ရင်း လက်တဖက်က ဗိုက်သားလေးပွတ်ကာ ထမိန်အား ဖြည်ချပြီး ခြေရင်းဘက် တွန်းချွတ်ရာ သဲအိခိုင်မှာ တင်းကော့နေသော ဖင်သားစိုင်ကြီးအား တခြမ်းဆီ ကြွပေးလိုက်၏။ ဖြူဝင်းသော ဗိုက်သားလေးအောက် အတွင်းခံဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးလေးကြားမှ စောက်မွှေးလေးများ ထိုးထွက်နေကာ အထဲမှ စောက်ဖုတ်အုံမှာ ဖေါင်းကြွနေသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေး ထပ်ချွတ်ရာ အမွှေးပါးပါးလေးနှင့် အခေါင်းပေါက်အထက်နား နီညိုရောင် အဖတ်လေး ၂ဖတ် လန်နေပြီး အဖုတ်အက်ကွဲကြောင်း အပေါ်၌ စောက်စိထိပ် အဆံလေးမှာ ပြူးထွက်နေ၏။ ဦးလှမောင် ညာလက်က စောက်ပတ်အုံအား လက်ဖဝါးနှင့် အုပ်ကိုင်ကာ အဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းထဲ လက်ခလယ်ကွေးပြီး ပွတ်ဆွဲကာ ခေါင်းထောင်နေသော စောက်စိအား ဖိကုတ်လိုက်ပြန်သည်။ ” အ …… အဟင့် ရှီးးးးးးးး ” နို့သီးခေါင်းလေး စို့လိုက် စောက်ဖုတ်ကလိလိုက်နှင့် သဲအိခိုင် တယောက် ရမ္မက်စိတ် ထကြွနေချိန်မို့ ဘေးနား ကိုယ်တစောင်း လှဲနေသော ဦးလှမောင် လီးအား ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ်ပေးနေသည်။ဦးလှမောင်မှာ နို့စို့ရင်း ကွမ်းစားထားသော ပါးစပ်မှာ အောက်ဘက် တဖြည်းဖြည်း ရွေ့သွားနေ၏။ဗိုက်သားလေးအား လျှာအပြားလိုက်ယက်ကာ ချက်ပေါက်လေးထဲ လျှာထိပ်ထိုးသွင်းကာ မွှေပေးလိုက်ပြန်သည်။ ” ဟူးးးး ရှီးးးး …… ဦးတုတ်ကြီးရာ … အင်းဟင်း ” ချက်ပေါက်လေးအား ဘေးမှ ကန်လန့်ဖျက် ထိုးစွပေးရင်း သဲအိခိုင် ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကြားထဲ ဒူးထောင်နေရာယူကာ ပေါင်ခြံအား ဆွဲဖြဲပစ်၏။
ပေါင်ဂွတည့်တည့် ဆီးခုံးမှာစ၍ ဖင်ကြားထိ အမွှေးများ ထိစပ်နေသော စောက်ပတ်အုံကြီးအား လျှာဖြင့် ပင့်ယက်တော့သည်။ ” အို့ … အာ …… ဟာ … ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ … ဦးတုတ်ကြီးရယ် … အီးးးး အ အ …… ငရဲတွေ ကြီးကုန်တော့မှာပဲ … အဟင့် … မလုပ်ပါနဲ့လို့ဆို … ဟာ့ ရှီးးးးးးးး … အို့ အ အားးးး ” အဖုတ်တပြင်လုံး ပင့်ယက်ရင်း ပြူးထွက်နေသော စောက်စိအား လျှာထိပ်ဖြင့် ကလော်လိုက်ရာ သဲအိခိုင် ဖင်ကြီး ကော့တက်သွားရ၏။ တနေကုန် အရက်ရောင်းနေသည်မို့ ဆိုင်းသိမ်းချိန် မိုးရွာလာသဖြင့် ရေမချိုးရသေးပေ။ ဦးလှမောင်မှာ သဲအိခိုင် ပေါင်ကြားမှ ချွေးနံ့ သေးနံ့များအား မက်မက်မောမော ရှုကာ အဖုတ်ကို အားရပါးရ ယက်ပေးနေသည်။ သဲအိခိုင် ဖင်ကြီးကော့ကာ လူးလိမ့်နေရင်း အိပ်ယာခင်းများ ဆွဲလိုက် နို့အုံ့အား ညှစ်လိုက် နှင့် အသံထွက် ညည်းနေတော့၏။ ခဏအကြာ အဖုတ်ထဲမှ စောက်ရည်များ ပန်းထွက်လာကာ ဖင်ကြီး မြောက်တက်နေပြီးမှ အောက်ကို ပြန်ကျလာသည်။ အသက်းမျှင်းရှုကာ ထထိုင်ပြီး ဦးလှမောင် ကျောပြင်အား ခပ်တင်းတင်း ဖက်ထားပြန်၏။ ” ဟင့် ဟင့် … ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ … အရမ်းချစ်တယ်ကွာ … ရှီးးးးးးးး … အရမ်းချစ်တယ် ” တတွတ်တွတ်ပြောရင်း ဒူးထောက်ထိုင်နေသော ဦးလှမောင် ပေါင်ကြားထဲ မျက်နှာချင်းဆိုင် လေးဖက်ကုန်း၍ လီးကြီးအား ကိုင်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ဂေါ်လီ ၃လုံးနှင့် လီးအရည်ပြား တလျှောက် အကြောပြိုင်းပြိုင်း ထနေသော လီးကြီးမှာ သဲအိခိုင်ပါးစပ်ထဲ တဆက်ဆက် တုန်နေရှာ၏။ သဲအိခိုင်မှာ ခေါင်းငုံ့ရင်း ဒစ်ဖူး အောက်ဖက် မေးသိုင်းကြိုး နေရာလေးအား လျှာဖြင့် ထိုးကလိကာ လီးထိပ်အား သွားဖြင့် မနာတနာလေး ကိုက်ပေးလိုက်သည်။ ” အားဟား … တော်ပြီ တော်ပြီ … သဲသဲရယ် … ရှီးးးး ပါးစပ်ထဲ ပြီးသွားလိမ့်မယ် … ထုတ်တော့ … အီးးးးးး အင်းဟင်း ” ဦးလှာမောင်မှာ လေးဖက်ထောက် လီးစုပ်ပေးနေသော သဲအိခိုင် ပုခုံးအား ဆွဲထူပြီး ကိုယ်တပတ် လှည့်ကာ ကုတင်ပေါ် လေးဖက်ကုန်းခိုင်း ပြန်၏။လေးဖက်ထောက် အနေထားနှင့် ကော့ထွက်နေသော ဖင်သားစိုင်၂ခြမ်းအား ဖြဲလိုက်ရာ ဖင်ဝ နီညိုလေးက စူပွစူပွလေး ဖြစ်နေရှာသည်။ ဖင်ဝလေးထဲ တံတွေးထွေးချကာ လက်မနှင့် ဖိထိုးလိုက်ပြန်၏။ ” အ … အဟင့် … ဘာလုပ်နေတာလဲလို့ … သိပ်အဆန်းထွင်တာပဲကွာ … ရှီးးးးးးးးးး အင်းဟင်းးးးး ” ဖင်ပေါက်ထဲ လက်မဖိသွင်းရင်း စောက်ခေါင်းဝထဲ ဒစ်ဖူး တေ့သွင်းရာ သဲအိခိုင် ဖင်ကြီး မြှောက်တက်လာ တော့သည်။ ” အမလေးးးး …… ဖြည်းဖြည်း … နာတယ် … အ ကျွတ်ကျွတ် ” စောက်ရည်စိမ့်နေလို့ တရစ်ချင်း ဝင်သွားပေမယ့် စောက်ခေါင်းအတွင်းထဲ ကြပ်နေတော့၏။လီးအရင်းထိ သွင်းကာ ခဏရပ်ပြီး ဖင်ဝလေးအား ညာဘက် လက်မလေးမြုတ်ကာ ဘယ်လက်ဖြင့် နို့အုံနှစ်ဖက်အား ညှစ်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ ” အို့ …… အ … အားဟား … အ ဟင့် … ရှီးးးးး ” ညည်းသံလေးများ ပေးလာသဖြင့် လီးအား ဖြည်းဖြည်းချင်း ထုတ်လိုက်ရာ အဖုတ်အတွင်းသားများ လိပ်ပါလာ၏။
သဲအိခိုင် ခါးလေး ခွက်ကာ စုပ်သပ်နေပြန်သည်။ တချက်းချင်း လိုးကာ ဖင်ပေါက်လေးအား ထိုးစွရင်း လီးအရင်းထိ ဇပ်ကနဲ့ ဆောင့်ပစ်လိုက်စဉ် လီးအရည်ပြားအား စောက်ခေါင်း အတွင်းသား များက ခပ်စီးစီး ညှစ်ပေးနေ၏။ တချက်တချက် နာတယ် ပြောနေပေမယ့် ဦးလှမောင်မှာ မရပ်တော့ပေ ခပ်သွက်သွက် ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ လေသံမိုးသံနှင့် အတူ အခန်းလေးထဲ လီးဝင်လီးထွက် သံများ ညည်းသံများ ဆူညံနေတော့၏။ မနားတမ်းလိုးရင်း ဦးလှမောင် လီးကြီးမှာ စောင်ခေါင်းထဲ တဒုတ်ဒုတ်နှင့် သွေးတိုးလာရသည်။ သဲအိခိုင်မှာလည်း စောက်ဖုတ်ထဲ ဒစ်ကြီးမှ ချိတ်ဆွဲနေသဖြင့် စောက်ခေါင်း အတွင်းသား များက အလိုလျောက် ညှစ်ပေးနေမိသည်။ဦးလှမောင်မှာ ဖင်ဝထဲ ထည့်ထားသော လက်မလေးအား ထုတ်ကာ သဲအိခိုင် ခါးလေးအား လက်နှစ်ဖက်နှင့် စုံကိုင်ရင်း အားရှိသလောက် ဆွဲလိုးလိုက်၏။ ” အမလေးးးး …… ကောင်းလိုက်တာ … ဦးတုတ်ကြီးရယ် … ဟုတ်တယ် …… လိုးလိုး … အဟင့် ဟင့် … မညှာနဲ့ … သဲသဲ … ပြီးတော့မှာ … အို့ အ အားးးး … အဟင့် … ထွက် ထွက် … ထွက်ကုန်ပါပြီ …… အားးးး အားးးးး ” သဲအိခိုင်တယောက် အသံပေါင်းစုံ ညည်းရင်း ခေါင်းလေး ဘယ်ညာရမ်းကာ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ပြီး ဦးလှမောင် လီးအား စောက်ပတ်လေးဖြင့် ညှစ်ထားလိုက်သည်။ လီးအရည်ပြား ညှစ်ခံရသဖြင့် ဦးလှမောင် မှာလည်း အချက်၂၀ခန့် တရစပ် ဆွဲလိုးရင်း လရည်များ ပန်းထည့်ကာ အထွဋ်ထိပ် ရောက်သွားတော့၏။ နောက်ဆုံးတချက် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုးကာ စောက်ပတ်အုံနှင့် ဆီးခုံး ကပ်ထားရင်း သဲအိခိုင် ကျောပေါ် မှောက်ချ ပစ်လိုက်သည်။ သဲအိခိုင်မှာလည်း လေးဖက်ကုန်းနေရာမှ ဝမ်းလျားမှောက်ကာ တအီးအီး ညည်းရင်း အနားယူနေတော့၏။ ထို့နောက့် ကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာ အဝတ်ဟောင်း တခုနှင့် ဦးလှမောင် လီးကြီးအား သန့်ရှင်းပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှ ထမိန်နှင့် သူမပေါင်ခြံအား သုတ်ကာ အခန်းပြင်သို့ ထွက်ရင်း သေးသွားပေါက်ကာ ခဏအကြာမှ ပြန်ဝင်လာ၏။ ဦးလှမောင်လည်း နောက်ဖေး အိမ်သာဖက် သေးသွားပေါက်ပြီး အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာရာ သဲအိခိုင်မှာ ကုတင်ပေါ် မှေးနေတော့သည်။နှစ်ယောက်သား စကားပြောရင်း ဦးလှမောင်မှာ နူတ်ဆက်ပြီး ပြန်သွား၏။ ဘယ်ချိန် အိပ်ပျော်သွားသည် မသိလိုက်ပဲ မနက်လင်းသည်နှင့် လင်ဖြစ်သူ အောင်ကြီး အိမ်ပြန်လာကာ သူမ ဘေးနား အိပ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အိပ်ယာထရာ နို့အုံများ ကျိန်းနေတော့၏ စောက်ဖုတ်လေးမှာလည်း ဦးလှမောင် လီးဒဏ်ကြောင့် နာကျင်နေသေးသည်။ အိပ်ခန်း ကြိုးတန်းပေါ်မှ ဘော်​လီတထည် လှမ်းယူပြီး မ၀တ်​​တော့ပဲ​ အင်္ကျီအပွတထည်အား ဝတ်ကာ မျက်နှာသစ်ရန် ထွက်ခဲ့လိုက်၏။
ရေဘုံပိုင် နား အရောက် မနေ့က နောက်ကျောမှာ ကြည့်နေသည့် ဦးလှမောင် အကြောင်း ပြန်သတိရကာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ ဆစ်ကနဲ့ ခံစားမိလိုက်ပြန်သည်။ မျက်နှာသစ်ပြီး နာရီကြည့်တော့ ဈေးဝယ်ရန် စောနေသဖြင့် အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်ကာ လင်ဖြစ်သူ ဘေးနား ခဏပြန်လှဲလိုက်၏။ ခဏအကြာ အကူခေါ်ထားသော မာမာဆိုသည့် ကောင်မလေး လာမှ ဈေးဝယ် ထွက်ခဲ့တော့သည်။ ဈေးသို့ အသွား နောက်ကျောဘက်မှ ကြည့်နေသလို ခံစားရသဖြင့် လှည့်ကြည့်ရာ လင်ဖြစ်သူ၏ ထော်လာဂျီ ကားအုံနာအား တွေ့လိုက်ရ၏။ ” အောင်ကြီးရော … သဲသဲ ” ” အိပ်တုန်း ဦးစံ … သမီးက ဈေးလာဝယ်တာ ” သဲအိခိုင် လှည့်ကြည့်သည်နှင့် အောင်ကြီး ဆရာ ဦးအိုက်စံမှာ ကော့ထွက်နေသော ဖင်ကြီးအား ကြည့်နေရာမှ အကြည့်ရွေ့ကာ စကားပြန်ပြောနေသည်။ ” အေးအေး … ကုန်ပို့ရမှာ ၂ညအိပ် ၃ရက် ကြာမယ် … အောင်ကြီး ဂေါက်ကြေးတွေ လာထုတ်ရင်း … အိမ်လာခဲ့ဦး … ဒီနေ့နော် ” ” ဟုတ် … ဆရာ ” ဦးအိုက်ဆံအား နူတ်ဆက်ကာ ဈေးဝယ်ပြီး ဈေးက ပြန်လာတော့ လင်တော်မောင် အောင်ကြီးအား ထွေလာဂျီ ကုန်ရကြောင်း ပြောပြလိုက်၏။ အောင်းကြီးမှာ မယားဖြစ်သူ စကားဆုံးသည်နှင့် ရေမိုးချိုးကာ ထော်လာဂျီ မောင်းရန် ထွက်သွားတော့သည်။ မာမာနှင့် အမြည်းအတွက် ချက်ပြုတ် ပြီးစီးကာ ရေချိုးဖို့ စဉ်းစားလိုက်သည်။ အိပ်ခန်းထဲ ကိုယ်တပိုင်း မှန်​​ချပ်ထဲ သူမကိုယ်သူမ ကြည်ရင်း ခ်ခ်ကနဲ့ ရယ်မိတော့၏။ မနက်က ဈေးဝယ်ရာ ဘော်လီ မပါသဖြင့်အင်္ကျီချွတ်လိုက်သည်နှင့် နို့သီးခေါင်းလေးမှာ ကျိန်းနေပြီး အရင်ထက်​ မို့​မောက်​​နေသည်​ကို မြင်နေရသည်။ ထမိန်ရင်လျားရင် အောက်ငုံ့ကြည့်ရာ စောက်မွှေးအုံအား မြင်သည်နှင့် စိတ်ထဲ တရှိန်းရှိန်းလေး ဖြစ်ပေါ်လာရ၏။ မနေ့က ၅ကြိမ်မြှောက် အလိုးခံခဲ့ရာ ဦးလှမောင်မှာ နို့အုံ နှစ်ဖက်အား ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ညှစ်ချေကာ ဆောင့်လိုးသဖြင့် ​ခုထိ ဆီးစပ်လေး အောင့်​​နေတုန်းပင်​။ ရေချိုး ပြီးသည်နှင့် အသားရောင် ဘော်လီလေး ဝတ်ရာ စူထွက်နေသော နို့အုံအား အကုန် မဖုံးနိုင်ပေ။ ဗီဒို အောက်ထပ်မှ အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်ပြီးသည်နှင့် ထမိန် အနက်ရောင် ဗြောင်လေးနှင့် အင်္ကျီကိုယ်ကြပ် အဝါရောင် လက်ပြတ်လေး တွဲဝတ်​လိုက်​သည်​။ ဆံနွယ်များ ခေါင်းစည်းကြိုးလေးနှင့် စုချည်ကာ နောက်ကျောဘက် ပို့ထားလိုက်ပြန်၏။ ဆိုင်မဖွင့်သေးပဲ အိမ်ရှေ့ တံခါးဖွင့်ကာ လင်ဖြစ်သူ ဆရာ ဦးအိုက်စံ နေအိမ်သို့ ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ လမ်းမပေါ်မှ မသွားပဲ လမ်းကြိုလမ်းကြားမှ လျှောက်ရင်း ဦးအိုက်စံ၏ ခြံရှေ့ ရောက်လာခဲ့၏။ လူရိပ်လူခြေ ကြည့်ကာ ခြံတံခါးဖွင့် ဝင်လာလိုက်သည်။ ” ဟော … သဲသဲ … အောင်ကြီး ပိုက်ဆံ လာထုတ်တာ ထင်တယ် … နောင်ဖေးခန်းမှာ ဆရာအိုက်စံ ရှိတယ် … ဝင်သွားလိုက် ” ” ဟုတ် … ဦးလေးမြိုင် … ကားထွက်ပြီပေါ့ ” ” အေးလေ … အောင်ကြီးတို့ အုပ်စုက … သွားတာ ၁နာရီလောက်ရှိပြီ … ငါက ဘရိတ်လေး ပြင်နေလို့ဟေ့ ” တခြံလုံး တိတ်ဆိတ်နေကာ အင်ဂျင်ချထားသော ထော်လာဂျီ ၂စီးသား ကျန်တော့၏။ သဲအိခိုင်မှာ ဦးမြိုင်အား နုတ်ဆက်ပြီး အိမ်မကြီးထဲ မဝင်ပဲ ဘေးမှ ကပ်လျှောက်လာကာ နောက်ဖေး အခန်းလေးရှေ့ အရောက် တံခါးက​စေ့ထားတာ​သဖြင့်​ တွန်းဝင်​ပြီး တံခါးဂျက်ထိုးလိုက်​သည်​။ အထဲ​ရော​က်တော့ ဦးအိုက်စံမှာ​စားပွဲခုံ ဘေးမှ ခုံတလုံးပေါ် ထိုင်ရင်း ဘီယာသောက်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရ၏။ သဲအိခိုင် ဝင်လာသည်နှင့် ဦးအိုက်စံမှာ ထလာပြီး ခါးသေးကျဉ်လေးအား ဖမ်းကိုင်ရင်း ပါးပြင်နှစ်ဖက်အား တရွှတ်ရွှတ် နမ်းရှိုက်လိုက်၏။ ” စောင့်နေရတာကြာပြီ … သဲသဲရယ် ” ” ဟင် … ဆိုင်အတွက် အမြည်းတွေ ချက်ပြုပ်နေရသေးတာလေ … ဦးစံကလည်း … ပြီးတာနဲ့ ရေမိုးချိုး ထွက်လာခဲ့တာ ” စကားပြောပြီး ဦးအိုက်စံ ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်ကာ ပြန်လည် နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။
” တရက်ပြီးတရက် ပိုလှလာပြီး … ဖင်ကြီးက ကော့ထွက်နေတာ … အောင်ကြီးက မလိုးနိုင်ဘူး ထင်တယ် ” ” အိုးးး … ဦးစံနော် … တွေ့လိုက်ရင် လူကို လိုးဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတာ … ဟွန့် … ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရ ဦးမှာနော် … အချိန်မရဘူး … ကိုအောင်ကြီး ခေါက်ကြေးတွေ အကုန်ထုတ်ပြီး အကြွေးတွေ ဆပ်ရဦးမှာ ” ” အင်းပါ … အောင်ကြီး ခေါက်ကြေး … ၁သိန်း၂သောင်းရယ် … ဟောဒီက သဲသဲဖို့ ၅သောင်းရယ် … အားလုံး ၁သိန်း ၇သောင်း ထုတ်ထားပြီးသားပါ … ခုံပေါ်မှာလေ … လာလာ ” စကားပြောရင်း ဦးအိုက်စံမှာ ဘီယာသောက်နေသော စားပွဲခုံနား ခေါ်လာလိုက်၏။ စားပွဲခုံပေါ်တွင် ၁ထောင်တန် အထပ်လိုက်လေးအား သရေပင်နှင့် စီးထားသည်ကို မြင်နေရသည်။ ပိုက်ဆံထုတ်အား မြင်သည်နှင့် သဲအိခိုင် မျက်လုံးများ အရောင်တောက်လာတော့၏။ ” အာ့မို့ … ဦးစံကို ချစ်နေရတာ … သိလား ခိခိ … လုပ်မှာဖြင့် လုပ် … သဲသဲ တကယ်အချိန် မရလို့ ” ” ဘာလုပ်ရမှာလည်း … သဲသဲရယ် ” ” အာ … လိုးဖို့ … လိုးဖို့ပြောတာလေ … ဦးစံရဲ့ … သိသားနဲ့ … ဟွန့် ” သဲအိခိုင်မှာ စကားပြောရင်း စားပွဲခုံ နှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း အခန်းဒေါင့်ရှိ ကုတင်ပေါ် တင်ပလွဲ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။။ကိုယ်ကျပ် အင်္ကျီလေးချွတ်ကာ အသားရောင် ဘော်လီချိတ်အား လက်နောက်ပြန် ဖြုတ်ချလိုက်ပြန်၏။ ထမိန် အထက်ဆင်အား ဖြည်ချရင်း ပက်လက်လှန် လှဲရာ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးအောက် ဖေါင်းကြွနေသော စောက်ပတ်အုံမှာ ပေါင်ဂွလေးထဲ ပြူးထွက်နေသည်။ ဦးအိုက်စံမှာ စားပွဲခုံပေါ်မှ သောက်လက်စ ဘီယာခွက်အား အကုန်မော့ချကာ ကုတင်နား တိုးကပ်လာရင်း သဲအိခိုင်၏ ကိုယ်လုံးအလှအား စိုက်ကြည့်လိုက်၏။ ” ဘာလို့ ကြည့်နေတာလဲ … ဟင့် … ဦးစံလည်း ချွတ်လေ ” ” အားပါး … တကယ်ကို လှတယ် … သဲသဲရယ် ” ပြောပြီးသည်နှင့် ဦးအိုက်စံမှာ ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ရာ လီးကြီး ပေါင်ကြားထဲ အမြှောင်းလိုက် ရမ်းခါနေကာ လဥ၂လုံးက တွဲလောင်းကျနေတော့သည်။ အမွှေးမျှင်ထူသူမို့ ချက်အောက်နားမှ ဆီးခုံးပေါ်ထိ အမွှေးများ ထိစပ်နေရာ လမွှေးများမှာ လဥများဘေးနာထိ ပေါက်ရောက်နေသည်ကို မြင်နေရ၏။ ဦးအိုက်စံ ကုတင်စောင်း ဝင်ထိုင်သည်နှင့် သဲအိခိုင်မှာ ကုတင်အောက် ဆင်းပြီး ပေါင်ကြားရှေ့ တည့်တည့် ဒူထောက်နေရာယူလိုက်ပြန်သည်။ လီးကြီးအား လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးရင်း နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေး ဟကာ ပြွတ်ကနဲ့ ဆွဲစုပ်ပစ်၏။ ဦးအိုက်စံ လီးကြီးမှာ သဲအိခိုင် ပါးစပ်ထဲ ခဏလေးနှင့် မာထင်လာတော့သည်။ ဦးအိုက်စံ လီးကြီးကလည်း လင်ဖြစ်သူ အောင်ကြီးလီးနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပေ။ ဦးလှမောင် လီးလောက် မတုတ်ပေမယ့် အရှည်မှာ ၈လက်မ ကျော်ကျော်လောက် ရှိ၏။ ရသလောက် ပါးစပ်ထဲ မျိုကာ လျှာဖျားလေးဖြင့် ယက်လိုက် ဆွလိုက် လုပ်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ ” အမလေး … ကောင်းလိုက်တာ သဲသဲရာ … အီစိမ့်နေပြီ … ခဏထုတ်ဦး … သဲသဲ စောက်ပတ်လေး ယက်မလို့ ” ဦးအိုက်စံနှင့် သဲအိခိုင်မှာလည်း ၅ခါ လောက် လိုးဖူးထားသဖြင့် တယောက်အကြိုက် တယောက် သိနေကြ၏။ ညစ်တီးညစ်ပတ် တစ်တစ်ခွခွ ပြောဆိုလိုးခြင်းကို သဲအိခိုင် နှစ်ခြိုက်လှသည်။
ဦးလှမောင်နှင့် ဦးအိုက်စံ မတူသည့်အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ” အင်း … စောက်ပတ်ကြီးက … ဖေါင်းကားနေတာ … ဘယ်လာက်တောင် အလိုးခံချင်နေလဲ … သဲသဲရယ် … ဦးစံ ယက်ပြီးတာနဲ့ … လိုးပေးမှာပါ ” ဦးအိုက်စံမှာ လီးမကြီးပဲ လီးတန်အရှည်နှင့် ရမ္မက်သွေး ကြွစေသော စကားလုံးများဖြင့် အချိန်ကြာကြာ ဆွဲလိုးနိုင်သည်မို့ သဲအိခိုင် စွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ငွေကြေး ပေးကမ်းသည့်အပြင် အလိုးသန်သူမို့ လင်မသိအောင် ခံနေမိ၏။ ဦးအိုက်စံကလည်း အပျို အအို မရွေးပဲ ငွေနှင့် မျှားကာ သူလီးအား စွဲလမ်းသွားအောင် လိုးပေးတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် လင်ရှိမယားများအား အများဆုံး ခေါ်လိုးတတ်၏။ သဲအိခိုင်အား အောင်ကြီး မလိုးနိုင်မှန်း သိ၍ ပိုက်ဆံလာထုတ်တိုင်း လီးအား မမြင် မြင်အောင် ပြကာ လမ်းကြောင်းခင်းထားပြီး လူချင်းရင်းနှီးလာမှ အပိုင် ချုပ်လိုးတော့သည်။ ဦးအိုက်စံ အားသာချက်မှာ သူ၏ ထော်လာဂျီ ယဉ်မောင်း သမားများအား အရက်ဖိုးမှ လွဲ၍ ပိုက်ဆံထုတ်မပေးချေ။ ယဉ်မောင်းသမားများ၏ မယားများကို အိမ်ခေါ်ပိုက်ဆံရှင်း ပေးကာ အခွင့်ရေး ရသည်နှင့် တက်လိုးပစ်၏။ ယဉ်မောင်းသမား အများစုမှာလည်း လမ်းတွင် အချိန်ကုန်ကာ မယားဖြစ်သူများ၏ အိမ်ထောင်ရေး သုခအား ရက်ခြားသာ ပေးနိုင်သည်။ လစ်လပ်နေသော ရက်များအား ဦးအိုက်စံထံ လာကုန်းနေကြရ၏။ ခုလည်း လင်မရှိချိန် လီးစုပ်ပေးနေသော သဲအိခိုင်အား ကုတင်ပေါ်ဆွဲတင်ကာ ပက်လက်အနေထားနှင့် ပေါင်နှစ်ခြမ်းဖြဲကာ စောက်ဖုတ်အား ကုန်းယက်တော့သည်။ သဲအိခိုင် စောက်ပတ်မှာ နှုတ်ခမ်းသားများ ဖေါင်းကြွနေပြီး ရေချိုးပြီးကာစ အနံ့သက်ကင်းနေသည်မို့ ဦးအိုက်စံ တယောက် တပြတ်ပြတ်နှင့် အားရပါးရ ယက်ပေးနေ၏။ စောက်ရည်များ ရွှဲလာသည်နှင့် တအုံလုံး လျှာအပြားလိုက် သိမ်းယက်ကာ စောက်ခေါင်းထဲ လျှာထိပ်လေးအား စုချွန်သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ လျှာဖြင့် ထိုးမွှေလိုက် စောက်စိအား ဆွဲစုက်လိုက်မို့ သဲအိခိုင်ဖင်ကြီး လေထဲ မြှောက်တက်လာကာ ပေါင်တန်များ တဇပ်ဇပ် တုန်ခါလာရ၏။ စောက်စိထိပ်လေးအား ဖိကိုက်ကာ စောက်ခေါင်းလေးထဲ လက်ခလယ်သွင်းပြီး အရည်များ ထွက်ကျလာသည်အထိ လက်နှင့် လိုးပေးနေပြန်သည်။ ” အားးး … အဟင့် ဟင့် … မခံနိုင်တော့ဘူး … ဦးစံရယ် … အမလေးးးး ရှီးးးးးးးးး …… ကျွတ် …… အ အားးးး အဟင့် ” ” ဘယ်လိုနေလဲ သဲသဲရယ် … ကောင်းလားဟင် ” စောက်စိလေးအား ဖိကိုက်ထားရာမှ လွတ်ကာ ကော့ပျံနေသော သဲအိခိုင်အား မေးနေတော့၏။ ” အင်း အင်း … ကောင်းတယ် … ကောင်းလွန်းလို့ … တက်လိုးပေးပါတော့ … ဦးစံရဲ့ … ဟင့် ဟင့် ” ” လိုးပေးမှာပေါ့ … သဲသဲရယ် … စောက်ပတ်က ယွနေပြီလား ” ” လိုးပါတော့ဆို … ဦးစံရယ် … အ အမလေး … ဟုတ်တယ် … စောက်ဖုတ်က ယားနေပါပြီ … လီးကြီးနဲ့ လိုးပေးပါတော့ နော်နော် … အင်းဟင်း … ဟင့် ဟင့် ” သဲအိခိုင် ငိုသံပါလေးဖြင့် တောင်းဆိုမှ ပေါင်ကြားထဲ စောက်ရည်များ ရွှဲကာ ဖေါင်းကားနေသော စောက်ပတ်ထဲ လီးထိပ် တေ့ကာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။
” ဗျစ် …… ဗွပ် … အားးးး …… အဟင့် … စွပ် ဘွတ်ဘွတ် … ကောင်းလိုက်တာ ဦးစံရယ် … ကျွတ် … လိုးလိုး ” ” စောက်ပတ်ကို ဖြဲထား သဲသဲ … ဦးစံ ပေါင်ထမ်းပြီး လိုးမယ် ” ဦးအိုက်စံ စကားဆုံးသည်နှင့် သဲအိခိုင်မှာ ပေါင်နှစ်ချောင်း မြှောက်ကာ ပုခုံးပေါ် ချိတ်တင်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စောက်ဖုတ်အား ဖြဲပေးလိုက်၏။ ဦးအိုက်စံမှာ သဲအိခိုင်ပေါင်နှစ်ဖက်အား ပုခုံးပေါ်ထမ်းကာ ဆောင့်လိုးပစ်သည်။ စောက်ခေါင်းလေးထဲ အရှိန်ဖြင့် ဝင်လာရာ လီးကရှည်သဖြင့် ဒစ်ဖူးမှာ သားအိမ်ဝ ဆောင့်မိတော့၏။ လီးအရင်းထိ ပစ်လိုးတိုင်း သားအိမ်ကွဲမတတ် ခံစားရသဖြင့် သဲအိခိုင်တယောက် ခေါင်းလေးမော့ကာ အံကြိတ်ခံနေရသည်။ ဖင်သားစိုင်နှစ်ဖက်မှာ ဦးအိုက်စံ ဆောင့်လိုးတိုင်း လှုပ်ခါယမ်းကာ ကုတင်ပေါ် အိကားသွားပြီး စောက်ခေါင်းထဲ ဒစ်ဖူးက ချိတ်ဆွဲနေရာ သဲအိခိုင်တယောက် လီးအရသာ တွေ့လာတော့၏။ ” ဆောင့် ဆောင့် … အင်း ဟုတ်တယ် …… အ အားးးးး ရှီးးးးး … မြန်မြန် လိုး …… အမလေးးးး အင်းဟင်း …… လိုးစမ်းပါ ဦးစံရဲ့ …… အဟင့် ဟင့် … သဲသဲ ပြီးချင်နေပါပြီဆို … အားးးး ရှီးးးးး ” ” သဲသဲ ယာက်ျားလိုးတာနဲ့ တူလား … အင့် …… ဘွတ်ဘွတ် … ဦးစံလိုးပေးတာ ကောင်းလား ” ” ဟင့်အင် … ဘယ်တူမှာလဲ … ဦးစံလီးက ရှည်ပြီး အလိုးလည်း သန်တယ် … ကောင်း … ကောင်း တယ် … ကြိုက်တယ် … ဦးစံရဲ့ လိုးစမ်းပါ … အမလေးးး … ထွက် ထွက် …… အ အားးး …… ထွက်ပြီရှင့် … အီးဟီး ကောင်းလိုက်တာ …… အင့် အင့် … အားးး အားးးး ” ဦးအိုက်စံမှာ စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်နေသော သဲအိခိုင်အား ကုတင်ပေါ်တွင် ဆွဲမှောက် လိုက်ပြန်သည်။ ဖင်သားစိုင်နှစ်ဖက်အား ဆွဲဖြဲကာ ဖင်ဝလေးထဲ တံတွေး တချက်ထွေးချကာ လီးထိအား ဖိထည့်ပစ်၏။ ” အို့ … အမေ့ …… ဗြိ … ဗျစ် … အ အ ” မှောက်ယက်ဖြစ်သွားသော သဲအိခိုင်၏ နောက်ကျောပေါ် ရှေ့ကိုယ်လုံး မှောက်ချကာ ပုခုံးသားလေးအား နမ်းရင်း လီးအရင်းထိ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ လီးအရည်ပြား တလျှောက် စောက်ရည်များ ရွှဲနေသဖြင့် ဖင်ပေါက်ထဲ ဗျစ်ကနဲ့ တိုးဝင်သွားတော့၏။ အိကားကော့ထွက်နေသော ဖင်ကြီးအား တဘတ်ဘတ်ဖြင့် ဆောင့်လိုးရာ သဲအိခိုင်တယောက် တအားအား ညည်းကာ ကုတင်ကြမ်းပြင်အား လက်နှစ်ဖက်က တဘုံးဘုံး ထုရိုက်နေပြန်သည်။ ” အမလေးးးး …… အ အ … သေပြီ သေပြီ … ဖြည်းဖြည်းနော် …… အားးးးးးးးးးး ” ဦးအိုက်စံမှာ သဲအိခိုင် မခံနိုင်ပဲ နာကျင်စွာ အော်ဟစ်နေသည်ကို အရသာခံကြည့်ကာ မနားတမ်း ပစ်ပစ်ဆောင့်လိုးပစ်၏။ ကျေနပ် အားရသည်အထိ လိုးပြီးမှ လီးအား ဖင်ထဲမှ ထုတ်ကာ သဲအိခိုင်အား ပက်လက်ပြန်လှန် လိုက်တော့သည်။ မျက်ရည်ဝဲနေသော သဲအိခိုင် မျက်နှာလေးအား ကြည့်ကာ မျက်စိတဖက် မိတ်ပြနေ၏။ သဲအိခိုင်မှာ ဘာလုပ်ရမလဲ ရိပ်မိလိုက်သည်။ဦးအိုက်စံ မျက်နှာပေါ် ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် တက်ခွရင်း စောက်ပတ်နှင့် မျက်နာ ကပ်ပေးလိုက်၏။
ဦးအိုက်စံ စောက်ပတ်အုံအား ယက်ပေးနေစဉ် မျက်နှာရှေ့ထောင်မတ်နေသော လီးအား ညာလက်ဖြင့် ဖမ်းထိန်းကာ လီးတန်ပတ်ပတ်လည်း လျှာအပြားလိုက် ယက်ကာ ဒစ်ဖူးအား ဆွဲစုပ်ပစ်သည်။ခပ်ကြာကြာလေး စိမ်လိုးနိုင်သည့် လီးကြီးမို့ မက်မက်မောမော စုပ်ပေးနေမိ၏။ ခဏအကြာ ဦးအိုက်စံမှာ သဲအိခိုင်အား လေးဖက်ကုန်းခိုင်းကာ ဖင်တလှည့် အဖုတ်တလှည့် ခုတင်တစ်ခုလုံး လှုပ်ခါလာအောင် မီးပွင့်မတတ် နောက်မှ ဆွဲလိုးတော့သည်။ သဲအိခိုင် တယောက် မြန်သလောက် အားပါသော လိုးချက်များအား တအားအား ညည်းရင်း လီးအရသာ ခံနေလိုက်၏။ ဖင်ပေါက်ထဲ မနားတမ်း ဆောင့်လိုးစဉ် ဒုတိယ အကြိမ် စောက်ရည်များ ပန်းထွက်ခဲ့ရပြန်သည်။ ဦးအိုက်စံမှာ စောက်ရည် ပန်းထွက်နေသော စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ ပြောင်းလိုးရာ ထိထိမိမိနှင့် တရစပ် လိုးနေသဖြင့် သဲအိခိုင် တယောက် ကော့ပျံရင်း အံအောနေတော့၏။ အချက် ၅၀ခန့် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုးပြီးမှ အံကြိတ်သံနှင်အတူ စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ လရည်များပန်းထည့်၍ ဦးအိုက်စံ တယောက် အထွဋ်ထိပ် ရောက်ရှိသွားရသည်။ ၅ရက်ခန့် အကြာ တဖျောက်ဖျောက်နှင့် မိုးဖွဲလေး ရွာနေစဉ် သဲအိချို တယောက် လင်ဖြစ်သူ ကားထွက်သွားရာ ပြန်မလာသဖြင့် ညပိုင်း ဆိုင်သိမ်းလျင် ဦးအိုက်စံ ဆီ သွားမေးရန် စဉ်းစားနေသည်။ ” ရွှမ်တစ်လုံးနဲ့ … လက်ဖက်သုပ် … ချဉ်ငံစပ်လေး တစ်ပွဲ … ဟေ့ ” သဲအိခိုင် တယောက် ဆိုင်ထဲက အော်သံကြောင့် အတွေးစလေး ပျက်ကာ ငွေးသိမ်း စားပွဲခုံနား ထိုင်နေရမှ လက်ဖက်သုပ်ရန် ထရပ်လိုက်၏။ နေ့ခင်းကြောင်တောင် မလာစဖူး အလာထူးနေသူမှာ ဦးအိုက်စံ ဖြစ်နေတော့သည်။ တယောက်ထဲတော့ မဟုတ် အသက် ၅၀ခန့် ရုပ်ရည် သန့်သန့် တောင့်တောင့်တင်းတင်း လူတယောက် အဖေါ်ပါလာခဲ့၏။ လက်ဖက်သုပ် တစ်ပွဲနှင့် အရက်တစ်လုံး ချပေးရင်း လင်ဖြစ်သူ သတင်း မေးကြည့်လိုက်သည်။ ” ဦးစံ လာတာနဲ့ … အတော်ပဲ … ညပိုင်း လာမေးမလို့ဟာ … ကိုအောင်ကြီးတို့ ပြန်မလာ ကြသေးဘူးလား ” ” နောက် ၃ရက်လောက်မှ ရောက်မယ် ထင်တယ် … ကုန်တွေပို့ပြီး အပြန် … မိုး တအားရွာလို့ … ကားလမ်းတွေ ပြက်နေတာဟ ” အရက်ပုလင်းနှင် အမြည်း ရောက်တာနဲ့ ဦးအိုက်စံနှင့် ပါလာသူမှာ ဖန်ခွက်ထဲ အရက် ငှဲ့ကာ တရှိန်ထိုး မော့ချပစ်၏။ ” အော် … ဟုတ် ဟုတ် … ဒါနဲ့ … ဦးစံဖို့ … ဘီယာ ချပေးရမလား ” ” ငါ မသောက်ပါဘူး ဟာ … ငါ့ မိတ်ဆွေကို … လိုက်ပြုစု ပေးတာ … နင်နဲ့လည်း … မိတ်ဆက်ပေးမလို့ … သူက ရန်ကုန်က ဟ … ကာစီနို့ရုံ ဖွင့်မလို့ … ငါတို့ မြို့မှာ … နေရာ ရှာတော့ … ဒီရပ်ကွက် လေးကို သဘောကျတယ် ပြောလို့ ” ” သဲသဲ … နေရာ ရှာပေးရမလား … ပွဲခတော့ … များများလေး ပေးရမှာနော် … ခ်ခ် ခ်ခ် ” ” သူနာမည်က … လောဟုန်တဲ့ … လောင်းကစားပဲ လုပ်တတ်တာ … ဒီမြို့မှာ လူခံ မရှိဘူး … နင်က လောင်းကစား ဝါသနာပါတော့ … မိတ်ဆက်ပေးတာ … နင်လည်း အကျိုးမယုတ်စေရပါဘူးဟာ ” ” အံမယ် … အာမခံရဲနေလိုက်တာ … ဦးစံနဲ့ … အမျိုးလား ” ” ညီအကိုတွေ လိုပါပဲ … တူမကြီးရယ် … ဦးကို ကူညီနိုင်မယ် မဟုတ်လား ” ဦးအိုက်စံနှင့် သဲအိခိုင် စကားပြောနေစဉ် ဦးလောဟုန်က ဝင်ပြောလိုက်၏။
ဘောစိမှန်း သိသည်နှင့် သဲအိခိုင် တယောက် အမူယာ ပြောင်းသွားရသည်။ ဒါမျိုးက ခြွေတတ်ရင် သေချာပေါက် ကြွေမှန်း အတွေ့ကြုံရ သိရှိနေ၏။ ” ဆိုင်က လူပါးတယ်နော် … ရပ်ကွက်က လူစည်ရဲ့လား ” ” အိုရ် … ဦးကလည်း … နေ့ခင်း ဘက်မို့ပါ … ညနေစောင်းတာနဲ့ … လာကြည့်လိုက် … ခ်ခ် ခ်ခ် ” သဲအိခိုင် မှာ မျက်ဝန်းရွဲကြီးများနှင့် ကြာပစ်ကာ ကြည့်ရင်း ဟန်လုပ် ရယ်နေတော့သည်။ အင်္ကျီအပါးလေးထဲမှ နို့အုံကြီး တုန်ခါလာအောင် ပုခုံးကစားကာ လုပ်ပြလိုက်၏။ ခုံပုလေးပေါ် ပေါင်ကား ထိုင်နေသော ဦးလောဟုန် ပုဆိုး ထဲမှ တွဲကျနေသော လီးကြီးအား အနီးကပ် မြင်နေရာ သဲအိခိုင်မှာ ဦးလှမောင်ကလည်း ဒီရက် အလာကျဲနေသည်မို့ ၅ရက်ခန့် အလိုးမခံရသဖြင့် သွေးသားဆန္ဒတို့ တောင့်တနေပြန်သည်။ စကားပြောရင်း ဦးလောဟုန် လီးအား ခိုးကြည့်ကာ ကာမစိတ်များ သိသိသာသာကြီး ထကြွနေရ၏။ မနက်ပိုင်းက ဈေးဝယ်ဖို့ မာမာ ရောက်လာတော့ ပိုဆိုးသွားသည်။ ဆိုင်အတွက် အမြည်းဟင်းလျာများ ကြော်လှော်ရင်း နှစ်ယောက်သား လင်ကြောင်း သားကြောင်း ပြောမိကြ၏။ မာမာကလည်း လူကြည့်တော့ အေးတိအေးစက်နဲ့ လင်ကြောင်းသားကြောင်း ပြောပြီဟေ့ဆို တစ်တစ်ခွခွ ပြောပြတတ်သည်။ ဝက်အူချောင်းများ ကြော်ပြီးသည်နှင့် အိပ်ခန်းဘက် မျက်လုံး ကစားကာ သဲအိခိုင်အား အောင်ကြီး မမြင်ကြောင်း စမေးလိုက်တော့၏။ ” မမသဲ … ကိုအောင်ကြီးရော … မမြင်ပါလား ” ” အေးဟာ … ၂ညအိပ် ဆိုပြီး … ၅ရက် ရှိပြီ ” ” ဒါဆို … မမသဲ … ဆာနေရောပေါ့ … ခိခိ ” မာမာ တယောက် ပြုံးစစမျက်နှာလေးဖြင့် သဲအိခိုင် ပေါင်ကြားထဲ ကြည့်ကာ ပြောဆိုနေသည်။ ” အမလေး ငါ့ကိုများ … နင့်လို မှတ်နေလား … နင်သာ … စမ်းနိုင် ရှိနေလျက်နဲ့ … မျိုးကြီး ကုန်းနေလို့ … မနှစ်က လင်မယား ကွဲမလို ဖြစ်တာ … ငါရှင်း ပေးလို့ ကောင်မ … ဟွန့် ” ” ကိုမျေိုးကြီး လီးက ကြီးတဲ့ အပြင် … မာမာ့ ဖင်ရော အဖုတ်ရော ယက်ပေးပြီးမှ လိုးတော့ … စွဲတာပေါ့ … ခိခိ … မမသဲ လူ … စမ်းနိုင်က အရက်စွဲသွားတော့ … လိုးရင်း အီးတပေါက်ပဲ … အားကို မရတာ ” မာမာကလည်း မဲ့ကာရွဲ့ကာဖြင့် သဲအိခိုင်အား ပြန်ပြောနေ၏။ အမှန်တကယ်လည်း မာမာ တယောက် လေထိုးကျွတ်ဖါ လုပ်သော မျိုးကြီး အိမ်သို့ လစ်ရင် လစ်သလို သွားသွား ကုန်းရာ လင်တော်မောင် စမ်းနိုင် မှာ သတင်းရသည်နှင့် မူးရမ်းကာ လင်မယား ကွဲဖို့ထိ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုချိန် သဲအိခိုင်မှာ စမ်းနိုင် ကြားသည့် သတင်းများမှာ မဟုတ်ကြောင်း အတင်း အာမခံကာ မာမာကိုလည်း မျိုးကြီးနှင့် ထပ်မပက်သက်ဖို့ ကူညီပြောဆို ပေးခဲ့၏။ ” အံမယ် … ခုလည်း … စမ်းနိုင် ကားထွက်ရင် … နင် ဘယ်သွား ကုန်းနေလည်း ဆိုတာ ငါမသိဘူး မထင်နဲ့နော် ” ” ဘယ်မှသွားမကုန်းပါဘူးဟ … မမသဲကလည်း ” ” ဟင် … အဲတာဆို … ညည်းစောက်ပတ် … လီးငတ်နေမှာပေါ့ … ခိခိ ” ” လင်တော်မောင် ခရီးထွက်ရင် … ဗိုက်က ထမင်းသာ ငတ်ချင်ငတ်မယ် … စောက်ဖုတ်တော့ လီးအငတ် မခံဘူး … လာထား အာဘွားပေါ့ … ခ်ခ် ” ” အံမယ် … နင် ခုလည်း … ကုန်းနေတာပေါ့ … တော်ပါအေ … ဆိုင်တောင် မဖွင့်သေးဘူး … ကျက်သရေ ယုတ်တယ် ” သဲအိခိုင် ဟန်လုပ်ပြောနေသော်လည်း စိတ်ထဲက ကြည်နုးနေမိတော့၏။ ဒီလို လီးနှင့် ဝေးနေသော အချိန်မျိုးတွင် လီးကြောင်း အဖုတ်ကြောင်း မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ပြောတာမျိုး အကြားချင်ဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ ” ဟာ … ဘာတွေ တွေးနေတာလဲ … သဲသဲရ ……ငါ မေးနေတာကို … ပြန်မဖြေဘူး ” ” ဟမ် … ဘာကိုလဲ … ဦးစံရဲ့ ” သဲအိခိုင်တယောက် မနက်က မာမာနှင့် ပြောစကားများ ပြန်တွေးနေရင်း ဦးအိုက်စံမှ သူမပေါင်တန်ကြီးအား ညှစ်ကာ မေးလိုက်မှ သတိပြန်ကပ်လာ၏။
” ဆိုင် ခဏ ပိတ်လိုက်ဟာ … ကိုလောဟုန်က …ခဏ အနားယူချင်လို့တဲ့ … ပြီးတော့ လူစီတဲ့ နေရာ ခြံဝင်း ကျယ်တာမျိုး ရှာပေးထားတဲ့ … ရော့ ၁သိန်း ဒါက … မုန့်ဖိုး သူပေးထားတာ ” ” အို့ … ဦးစံက … သဲသဲကို အထင်သေးတာလား … ငွေမျက်နာ တခုတည်းနဲ့တော့ … မခံဘူးနော် ” ” ဟာ … သဲသဲကလည်း … အထင်သေးရင် သူပါသာ … တခြား သွားလည်း ရသားပဲ … ၁သိန်းဆို ငယ်ငယ်ချောချော လေးတွေ … အများကြီးပဲ ” ဦးအိုက်စံ၏ ထိထိမိမိ စကားလုံးများ ကြောင့် သဲအိခိုင် တယောက် ငြိမ်ကျသွားရသည်။ ” ခု … အဲဒီ လူကြီးကရော ” ” နောက်ဖေး သေးသွားပေါက်တယ် … ဆိုင်ပိ်တ်လိုက်ဟာ … ငါလည်း ဘေးက ရှိနေမှာပါ … နင် ကြောက်နေ မဆိုးလို့ ” သဲအိခိုင် တယောက် ဦးအိုက်စံ စကားနှင့် ရမ္မက်ဆန္ဒ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် စောက်ဖုတ်ထဲက ယားသလိုလို ရွသလိုလို ဖြစ်လာကာ ရှက်ပြုံးပြုံး လိုက်တော့၏။ ဆိုင်တခါး ပိတ်ကာ အိမ်ရှေ့ တံခါးပါ သော့ခတ်ပစ်သည်။ သဲအိခိုင် တယောက် လက်တွေ့တွင် အတော် ကြိုးစားနေရရှာ၏။ ဦးလောဟုန် ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ သိချင်တာမို့ ဦးအိုက်စံ ဘက်ကို မျက်နှာလှည့်ပြီး ဦးလောဟုန်ဘက် ဖင်သားကြီး ကော့ပြလိုက်သည်။ ဦးလောဟုန်မှာ ရွှမ်ပုလင်း ထဲမှ လက်ကျန် အရက်များအား ဖန်ခွက်ထဲ လက်၂ဆစ်ခန့် ငှဲ့သောက်ကာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပင် ကြည့်နေပြန်သည်။ သဲအိခိုင် တယောက် စိတ်ထဲ ဒေါသလေးထွက်ကာ ဦးအိုက်စံ ပေါင်တန်ပေါ် ခွထိုင်ရင်း ဖင်ကြီး ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ပွတ်ပြလိုက်၏။ ဦးအိုက်စံမှာ သူ့ညာဘက် ပေါင်ပေါ် ခွထိုင်ပွတ်နေသော သဲအိခိုင် အင်္ကျီအောက်နားစလေးမှ လက်ထိုးသွင်းကာ ဘော်လီပေါ်မှ နို့အုံနှစ်ဖက်အား ညှစ်ချေနေသည်။ ဦးလောဟုန်မှာ လိုက်ကြည့်နေစဉ် ဦးအိုက်စံ လက်မှာ အင်္ကျီအောက်နားစမှ ပြန်ထွက်လာကာ သဲအိခိုင် ပေါင်တန် တုတ်တုတ်အားပွတ်သတ်ပေးနေပြန်၏။ သဲအိခိုင်မှာ ဘယ်လက်ဖြင့် ဦးအိုက်စံ ပေါင်ကြားထဲ ဦးလောဟုန် မြင်ရန် ပွတ်သပ်ပေးပြလိုက်သည်။ ထိုစဉ် ခုံပုလေးပေါ် ထိုင်နေသော ဦးလောဟုန် ပုဆိုးကြားမှ ဆက်ကနဲ့ လီးကြီး ထောင်လာသည်ကို မြင်လိုက်ရတော့၏။ သဲအိခိုင်မှာ ခုလို လုပ်နေမိတာ မိန်းမပျက်တယောက်လို့ ဖြစ်နေပြီလား တွေးရင်း ရပ်လိုက်ရ ကောင်းမလား တွေးမိနေသည်။ ဆန္ဒတွေကလည်း ယောင်္ကျားနှစ်ယောက်နှင့် တပြိုင်ထဲ အလိုးခံချင်သည့် စိတ်က ထက်သန် နေပြန်၏။ အလကားတော့ မဖြစ်ချေ ခု သူစိမ်း ယောင်္ကျား ၂ယောက်လုံးမှာ သူမအတွက် ငွေတွင်းတေမို့ စောက်ဖုတ်အား အရင်းနှီး သဖွယ် သဘောထားလိုက်တော့သည်။ အဓိက မှာ ဦးလှမောင် ထံ ပေါင်ထားသော ယစ်မျိုးလိုင်စင်အား ပြန်ရွေးယူရန် ဖြစ်၏။ မာထင်နေသည့် ဦးအိုက်စံ လီးအား ကိုင်ရင်း ပေါင်တန်ပေါ် ထိုင်ပွတ်ရသည် အရသာမှာ စိတ်ထဲ တရှိန်းရှိန်းလေးနှင့် ဘေးမှာ ထိုင်ကြည့် နေသော ဦးလောဟုန် ဘာများ ထလုပ်လိုက်မလဲဟု မျှော်လင့်ချက်က စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းနေပြန်သည်။
ဦးအိုက်စံ လက်တဖက် ထမိန်အောက်နားစလေး မကာ ပေါင်ဂွထဲ ရောက်လာစဉ် ဖမ်းတားပြီး အိပ်ခန်းထဲ သွားရန် ခပ်တိုးတိုး ပြောပြလိုက်၏။ ” ဆိုင်ထဲလိုးလို့ … လူမိကုန်မှာ … ဟွန့် ” အခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် သဲအိခိုင်တယောက် ဆံပင်​များအား ခေါင်းစည်းကြိုး တကြိုးဖြင့် စုချည်လိုက်၏။ ထမိန် ချွတ်ချလိုက်သည်နှင့် ဘော်လီ အသားရောင်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော နို့အုံများနှင့် ဖင်သားစိုင်ကြီးအား မနိုင်တနိုင် ထိန်းထားသော အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေး ပေါ်လာတော့သည်။ ဦးအိုက်စံရော ဦးလောဟုန်ပါ ၂ယောက်သား ငေးကြည့်နေကြ၏။ သဲအိခိုင်မှာ ဖင်ကြီးလှုပ်ကာ ကုတင်ပေါ်ထိုင်ရင်း ဘော်လီချိတ် ဖြုတ်ရာ အနည်းငယ် အိတွဲနေသော နို့အုံကြီး ဘွားကနဲ့ ထွက်ကျလာသည်။ အတွင်းခံမချွတ်ခင် ဦးအိုက်စံမှာ သဲအိခိုင်ဘေးနား ကပ်ထိုင်ရာ လီးကြီးအား ညာလက်ဖြင့် ပြန်လည် ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်၏။ ဦးအိုက်စံမှာ သဲအိခိုင် နူတ်ခမ်းအား တေ့နမ်းကာ နို့အုံနှစ်ဖက်အား လက်နှင့် အုပ်ပြီး ညှစ်ပေးနေသည်။ သဲအိခိုင် တယောက် ဘေးတိုက်အနေထားနှင့် ဦးအိုက်စံအား လွတ်နေသော ဘယ်လက်ဖြင့် သိုင်းဖက်ကာ ခပ်ပြင်းပြင်း ပြန်နမ်းနေ၏။ ထိုစဉ် သဲအိခိုင် ဘယ်ဘက်ခြမ်းအား ဦးလောဟုန် ဝင်ထိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားထဲ တိုးဝင်လာပြန်သည်။ လက်ချောင်းလေးများက ပေါင်အတွင်းသားလေးအား ပွတ်သပ်နေရင်း စောက်ဖုတ်ပေါ် ရောက်လာတော့၏။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီပေါ်မှ အဆွခံရကာ စောက်ရည်များ ရွှဲနှစ်လာရသည်။ ဦးအိုက်စံမှာ နူတ်ခမ်းချင်း စုပ်ပေးနေရာမှ သဲအိခိုင်အား ပက်လက်လေး လှန်ချပစ်၏။ သဲအိခိုင် ပက်လက်လေး ဖြစ်သည်နှင့် အဖုတ်နိုက်နေသော ဦးလောဟုန်မှ အတွင်းခံအား ဆွဲချွတ်လိုက်ပြန်သည်။ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေး နှစ်ဖက်ကြား စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အရည်လဲ့နေ၏။ ” အင်း … စောက်ပတ်က ဖေါင်းကားနေတာ ယက် ပစ်ချင်စရာကြီး ” ဦးလောဟုန်မှာ သဲအိခိုင် ​ပေါင်​ခွကြားက အဖုတ်​​အား ကြည့်​ရင်း ပြောနေလိုက်၏။ သဲအိခိုင်မှာ ဦးလောဟန် စကားကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှား လာရ၏။ ခုမှ မြင်ဖူးသော သူစိမ်းယောင်္ကျားမှာ သူမ အဖုတ်အား ယက်ပေးချင်သည်ဟု ပြောနေသည်ကို ကြားလိုက်ရသဖြင့် အားရကျေနပ် နေပြန်သည်။ ဦးအိုက်စံမှာ သဲအိခိုင် ​​နို့နှစ်​လုံးအား လက်​နှစ်​ဖက်​နဲ့ဆုပ်​နယ်​ကာ နှုတ်ခမ်းချင်း ပြန်စုပ်နေ၏။ ခဏအကြာ သဲအိခိုင် နို့သီးခေါင်းလေး တဖက်အား စုပ်စဉ် ဦးလောဟုန် မှာလည်း အဖုတ်အား ငုံ့ယက်တော့သည်။ သဲအိခိုင်တယောက် သူစိမ်းယောင်္ကျား ၂ယောက်မှ နို့အုံနှင့် အဖုတ်အား ပြိုင်တူ စုပ်ယက်ပေးနေရာ ကာမ ဆန္ဒအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်မတတ် တကိုယ်လုံး တုန်ခါ သွားတော့သည်။ တခါမှ မရဘူးသော ကာမစည်းစိမ်လေး ခံယူရင်း ခဏအကြာတွင် မထိန်းနိုင်ပဲ စောက်ရည်များ ကော့ပန်းလိုက်၏။ ကာမအရသာလေး အထွတ်အထိပ်ရောက်သွားသဖြင့် မျက်လုံးလေး မိတ် ခဏ အနားယူကာ မျက်လုံး ပြန်ပွင့်သည်နှင့် ဦးလောဟုန်မှာ သဲအိခိုင် ပေါင်နှစ်ဖက် ဆွဲမြှောက်ကာ ဒူးထောက် ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ ဦးလောဟုန် ဆောင့်ချက်များအား ခါးကော့ထိုးကာ ပြန်ဆောင့်ရင်း တအားအား ညည်းနေရပြန်၏။
ဦးလောဟုန်မှာ မနားတမ်း ဆောင့်လိုးရင်း စောက်ခေါင်းထဲက လီးအား ထုတ်ကာ ဒူးထောက်လျက် အနေထားဖြင့် သဲအိခိုင် မျက်နှာဘေးနားမှ လီးထိပ်အား ပါးစပ်ပေါ် တင်ပေးလိုက်၏။ သဲအိခိုင် မှာ ဦးအိုက်စံ လီးထက် တုတ်သော ဦးလောဟုန် လီးအား နူတ်ခမ်းဟကာ ဆွဲစုပ်လိုက်တော့သည်။ ပက်လက်အနေထားဖြင့် စုပ်နေရာမှ လေးဖက်ထောက်စုပ်ပေးပြန်၏။ ဦးလောဟုန် လီးအား လေးဖက်ထောက် ဖင်ဘူးတောင်း ထောင်၍ စုပ်လိုက်သည်နှင့် ဖင်ကြီးများမှာ ဦးအိုက်စံ ရှေ့ ကော့ထွက်နေတော့၏။ ဦးအိုက်စံမှာ ကြည့်နေရင်း သဲအိခိုင် နောက်မှ နေရာယူကာ တချက်ထည်းဖြင့် လီးအဆုံးထိ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ အားပါပါဖြင့် ပစ်လိုးသဖြင့် သဲအိခိုင် တယောက် လေးဘက်ထောက် အနေထားနှင့် ရှေ့ကပ်သွားရာ စုပ်နေသော ဦးလောဟုန်လီးက သူမပါးစပ်ထဲ အရင်းထိ ဝင်သွားတော့၏။ ဦးလောဟုန်မှာ လီးအရည်ပြား တလျှောက် လည်ပင်း ကြွက်သားများနှင့် ပွတ်တိုက်ကာ ထူးကဲသော အရသာလေး ရရှိလိုက်သည်။ ပါးစပ်ထဲ လီးအရင်ထိ ဝင်လာသဖြင့် အခံရခက်သော်လည်း အဖုတ်ရော ပါးစပ်ပါ တပြိုင်ထဲ အလိုးခံနေရသဖြင့် သဲအိခိုင်မှာ အရသာ ၂မျိုး ဒွန်တွဲ ခံစားနေရ၏။ ပါးစပ်ထဲ တင်းပြောင်နေသော လီးကြီးမှာလည်း စချိန်မှီလှသည်။ သဲအိခိုင် လျှာဖျားလေးနှင့် ဒစ်ဖူးအား ကလိကာ လီးအား ပါးစပ်ဟပြီး မက်မက် မောမော စုပ်ပေးနေသည်။ ” အာဟား … ကောင်းလိုက်တာ သဲသဲရယ် ” သဲအိခိုင်မှာ ပါးစပ်ထဲရှိ လီးထပ်အား လျှာလေးဖြင့်မနားတမ်း ကလိပေးရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ကာ စုပ်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ဦးလောဟုန်မှာ တရှီးရှီး စုပ်သပ်ရင်း သဲအိခိုင် နောက်စိလေးကို ကိုင်ကာ လီးအား ပါးစပ်ထဲ ဖိသွင်းပစ်၏။ သဲအိခိုင် တချက်ပျို့တက် လာသဖြင့် ဦးလောဟုန်မှာ လီးကြီးအား ပါးစပ်မှ ဆွဲထုတ်ကာ လီးတန်နှင့် ပါးပြင်လေးအား တဘတ်ဘတ် ရိုက်ပေးနေသည်။ ဖင်သားစိုင် ၂ခြမ်း ကြားမှ တံတွေးများဖြင့် ပြောင်လဲ့နေသော စောက်ဖုတ်အား ဦးအိုက်စံ အဖုတ် အကွဲကြောင်း လေးအတိုင်း လီးထိပ်ဖြင့် အထက်အောက် ပွတ်ဆွဲ ပြီးမှ ဗျစ်ကနဲ့ ဆွဲလိုးပစ်သည်။ သဲအိခိုင်မှာ ရှေ့မှ ဦးလောဟုန် လီးကြီးအား မျက်နှာ အနှံ့ အပွတ်ခံရင်း ဖင်ကြီးကော့ကာ ဦးအိုက်စံ လီးကြီးအား အလိုးခံနေတော့၏။ ” ဗျစ် ဗျစ် … အ အမေ့ …… ဘွတ် … အု ဝု … ဖူး ဖလူး … ဝူး ” သဲအိခိုင် တယောက် ပါးစပ်ရော အဖုတ်ရော တပြိုင်ထဲ အလိုးခံရသဖြင့် ညည်းရာ အသံမထွက်နိုင်ပဲ တဝုဝု တဝူးဝူးနှင့် ပါးစပ်လေးဖောင်းသွားပြီး အသက်မှန်အောင် ရှုနေရသည်။။ စောက်ခေါင်းထဲတွင် ဦးအိုက်စံ လီးကြီး ဝင်ထွက်နေရာ ဦးလောဟုန်မှာ သဲအိခိုင် ပါးစပ်အား လိုးရင်း နို့သီးခေါင်းများအား ချေပေးနေလိုက်၏။ ဖင်ကြီး ရမ်းကာ ဦးအိုက်စံ လီးအား စောက်ပတ် အတွင်းသားဖြင့် ညှစ်ကာ ခါးလေး ကော့ပေးလိုက်ပြန်၏။ ဦးလောဟုန်မှာ တဟွတ်ဟွတ် သီးနေသော သဲအိခိုင်၏ ပါးစပ်ထဲမှ လီးအား ထုတ်ကာ ခဏ အနားပေးထား၏။
လီးကြီး ကျွတ်ထွက်သွားသည်နှင့် သဲအိခိုင်မှာ အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ထားရင်း မနားတမ်း လိုးနေသော ဦးအိုက်စံ၏ လီးအရသာအား ခံစားနေတော့သည်။ ခဏအကြာ ဖင်ကြီး ထောင်တက်လာရင်း စောက်ရည်များ ပန်းထွက်လာ၏။ ” ထွက် ထွက် … ထွက်ပြန်ပြီ … ဟင့် ဟင့် ” ဦးအိုက်စံမှာ လီးကြီးအား ဆွဲထုတ်သလို ဦးလောဟုန်အား မျက်စပစ် အချက်ပေးလိုက်ပြန်သည်။ဦးလောဟုန်မှာ သဲအိခိုင် ပြီးသွားသည်ကို ကြည့်ရင်း လီးအား ပွတ်သပ်နေရာမှ ဦးအိုက်စံနေရာအား ဝင်ယူကာ ဖင်ဝလေး လီးထိပ်ဖြင့် တေ့ထားလိုက်၏။ ” ဟင် … ဖင်ကို လိုးမလို့လား ” ” မဟုတ်ပါဘူး သဲသဲရဲ့ … စောက်ဖုတ်ကိုပဲ လိုးမှာပါ ” စကားဆုံးသည်နှင့် ဦးအိုက်စံ ပူပူနွေးနွေး လိုးထားသော သဲအိခိုင် ဖင်ကြားမှ စောက်ဖုတ်အား ဆောင့်လိုးတော့သည်။ ” ဗျစ် … ဘွတ် ဘွတ် … ဇွိ ဇွိ … ဖွပ် ဘွတ် …… အ အားးးး ” စောက်ရည်ထွက်ပြီးကာစ မနားပဲ ထပ်လိုးခံရသဖြင့် သဲအိခိုင် စောက်ဖုတ်မှာ လီးဝင်သွားတိုင်း တဇွိဇွိဖြင့် မြည်နေပြန်၏။ သဲအိခိုင် ဖင်ကြီးအား လမွှေးအုံ ဖိကပ်ပွတ်တိုက်ရင်း တွဲကျနေသော ဦးလောဟုန် လဥနှစ်လုံးက စောက်ဖုတ်အား ဆောင့်လိုးတိုင်း ရိုက်မိသဖြင့် အရသာ ထူးကဲစွာ ခံစားနေရသည်။ ” ရှီးးးးး အ အားးးး …ကောင်းလာပြန်ပြီ … အိုး ဒုက္ခပဲ … ထပ် ထွက် တော့မယ် ” တအားအား ညည်းရင်း နောက်ပြန် ဆောင့်နေလိုက်ရာ ဦးလောဟုန် လီးမှာလည်း စောက်ခေါင်းထဲ လီးအရည်ပြား ယားယံလာပြီး သုတ်ရည်များ ပန်းထည့်လိုက်၏။ သဲအိခိုင် မှာလည်း ဒုတိယအကြိမ် စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ပစ်တော့သည်။ ” ရှီးးးးးး အားဟား … ကောင်းလိုက်တာ သဲသဲရယ် ” ဦးလောဟုန်မှာ လီးအား မချွတ်ပဲ သဲအိခိုင် ဂုတ်သားလေးအား ကုန်းနမ်းရင်း တွဲကျနေသော နို့အုံအား အောက်မှနှိုက်ကာ သုံးလေးချက် ဆွဲဆောင့်ပစ်ရာ ဖင်သားစိုင် ကြီးများ တုန်ခါ သွား၏။ သဲအိခိုင်မှာလည်း နုံးချိပျော့ခွေရင်း ဟင်းကနဲ့ သက်ပြင်းချကာ မျက်တောင်လေးများ စင်းကျသွားတော့သည်….ပြီး။